Tsy fantatra mazava izay nahazo azy fa samy teny teny an-kalamanjana ary tanàna iray satria samy teny Anosibe. Asa na noho ny hanoanana diso tafahoatra na aretina na mety ho fahapoizinana ara-tsakafo. Vao niely ireo tranga roa ireo, dia nisy resaka hafa nandeha fa ny talata lasa teo, dia efa nisy olona iray ihany koa namoy ny ainy tampoka teny an-toerana, teo akaikin’ny toeram-pivarotana fanafody malaza iray. Fifandrifian-javatra ihany ve hoe toerana sy tanàna iray no nisehoan’ny tranga ? Vao tapa-bolana ihany koa izay no nisiana lehilahy heverina ho maty ho azy hita teny Namontana. Tena mampalahelo satria toa tranga sy fahafatesana maneho fa mety maty noho ny fahasahiranana sy ny tsy fananana ireny satria na ny hanin-kohanina aza tsy hita sy manahirana amin’izao fotoana izao. Tena sahirana sy mahantra rahateo ny Malagasy. Na izany aza, tokony hosokafana ny fanadihadiana mikasika ireny faty miampatrampatra ireny sao sanatria misy ny areti-mandoza mandripaka olona. Vanim-potoana mampiely ny valan’aretina rahateo ny fotoanan’ny orana tahaka izao, raha tsy hilaza afa tsy ny pesta, izay efa misy ny toerana voalaza fa nahitana izany tahaka ny any Antanifotsy. Mila fandraisana andraikitra mafonja sy haingana ny toe-javatra tahaka izao sao hitera-doza ho an’ny vahoaka efa sahirana sy trotraky ny fahantrana lalina.